09.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर , जुन प्वाइन्ट सुन्छौ त्यसलाई रिभाइज गर।”
तिम्रो यादको यात्रा कहिले पूरा हुन्छ?
जब तिम्रो कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका दिँदैन, कर्मातीत अवस्था हुन्छ अनि यादको यात्रा पूरा हुन्छ। अहिले तिमीले पूरा पुरुषार्थ गर्नु पर्छ, निराश हुनु हुँदैन। सेवामा तत्पर रहनु पर्छ।
प्यारा बच्चाहरू आत्म-अभिमानी भएर बसेका छौ? बच्चाहरूले सम्झन्छन्– आधाकल्प हामी देह-अभिमानी रहेका छौं। अब देही-अभिमानी भएर रहनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। बाबा आएर सम्झाउनु हुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बस, तब नै बाबाको याद आउँछ। नत्र भुल्छौ। याद गरेनौ भने यात्रा कसरी गर्न सक्छौ! पाप कसरी काटिन्छ! घाटा पर्छ। यो त घरी-घरी याद गर। यो हो मुख्य कुरा। बाँकी त बाबाले अनेक प्रकारका युक्ति बताउनु हुन्छ। गलत के हो, ठीक के हो– त्यो पनि सम्झाउनु भएको छ। बाबा त ज्ञानसागर हुनुहुन्छ। भक्तिलाई पनि जान्नुहुन्छ। बच्चाहरूलाई भक्तिमा के-के गर्नुपर्छ। सम्झाउनु हुन्छ– यज्ञ तप आदि गर्नु यो सबै हो भक्तिमार्ग। बाबाको महिमा गरे पनि उल्टो गर्छन्। वास्तवमा कृष्णको महिमा पनि पूरा जानेका छैनन्। हरेक कुरालाई बुझ्नु पर्छ नि। जसरी कृष्णलाई वैकुण्ठनाथ भनिन्छ। ठीक छ, बाबाले सोध्नुहुन्छ– के कृष्णलाई त्रिलोकीनाथ भन्न सकिन्छ? गायन पनि गरिन्छ नि त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकका नाथ अर्थात् तीन लोक मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ– तिमी ब्रह्माण्डका पनि मालिक हौ। के कृष्णले यस्तो सम्झन्छन् होला– म ब्रह्माण्डको मालिक हुँ? होइन, उनी त वैकुण्ठमा थिए। वैकुण्ठ भनिन्छ स्वर्ग नयाँ दुनियाँलाई। त्यसैले वास्तवमा त्रिलोकीनाथ कोही पनि छैन। बाबाले ठीक कुरा सम्झाउनु हुन्छ। तीन लोक त छन्। ब्रह्माण्डको मालिक शिवबाबा पनि हुनुहुन्छ तिमी पनि हौ। सूक्ष्मवतनको त कुरा नै छैन। स्थूलवतनमा पनि उहाँ मालिक हुनुहुन्न, न स्वर्गको न नर्कको मालिक हुनुहुन्छ। कृष्ण हुन् स्वर्गका मालिक। नर्कको मालिक हो रावण। यसलाई रावण राज्य, आसुरी राज्य भनिन्छ। मनुष्यले भन्छन् पनि तर बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। रावणको १० शिर देखाइन्छ। ५ विकार स्त्रीका, ५ विकार पुरुषका। अब ५ विकार त सबैका छन्। सबै छन् नै रावण राज्यमा। अहिले तिमी श्रेष्ठाचारी बनिरहेका छौ। बाबा आएर श्रेष्ठाचारी दुनियाँ बनाउनु हुन्छ। एकान्तमा बस्दा यस्ता-यस्ता विचार सागर मंथन चल्छ। त्यस पढाइको लागि पनि विद्यार्थीले एकान्तमा किताब लिएर पढ्न जान्छन्। तिमीलाई किताब त पढ्नु पर्ने आवश्यकता छैन। हो, तिमीले प्वाइन्ट नोट गर्छौ। यसलाई फेरि रिभाइज गर्नुपर्छ। बुझ्नको लागि यी धेरै गहन कुरा हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ– आज म तिमीलाई गहन भन्दा गहन नयाँ-नयाँ प्वाइन्ट सम्झाउँछु। पारसपुरीका मालिक त लक्ष्मी-नारायण हुन्। यस्तो पनि होइन– विष्णु हुन्। विष्णुलाई पनि बुझ्दैनन्– यी नै लक्ष्मी-नारायण हुन्। अहिले तिमीले छोटकरीमा लक्ष्य-उद्देश्य सम्झाउँछौ। ब्रह्मा-सरस्वती कोही आपसमा स्त्री-पुरुष होइनन्। यी त प्रजापिता ब्रह्मा हुन् नि। प्रजापिता ब्रह्मालाई ग्रेट-ग्रेट ग्रान्ड फादर भन्न सक्छौ, शिवबाबालाई केवल बाबा नै भनिन्छ। बाँकी सबै हुन् भाइ-भाइ। यतिका सबै ब्रह्माका बच्चा हुन्। सबैलाई थाहा छ– हामी भगवानका बच्चाहरू भाइ-भाइ हौं। तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकारी दुनियाँमा। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। नयाँ दुनियाँ सत्ययुगलाई भनिन्छ। यसको नाम फेरि पुरुषोत्तम संगमयुग राखिएको छ। सत्ययुगमा हुन्छन् नै पुरुषोत्तम। यी धेरै आश्चर्यजनक कुरा छन्। तिमी नयाँ दुनियाँको लागि तयार भइरहेका छौ। यस संगमयुगमा नै तिमी पुरुषोत्तम बन्छौ। भन्छन् पनि हामी लक्ष्मी-नारायण बन्छौं। यी हुन् सबै भन्दा उत्तम पुरुष। उनीहरूलाई फेरि देवता भनिन्छ। उत्तम भन्दा उत्तम नम्बरवन हुन् लक्ष्मी-नारायण फेरि नम्बरवार तिमी बच्चाहरू बन्छौ। सूर्यवंशी घरानालाई उत्तम भनिन्छ। नम्बरवन त छन् नि। विस्तारै-विस्तारै कला कम हुँदै जान्छ।
अहिले तिमी बच्चाहरूले नयाँ दुनियाँको शुभ साइत गर्छौ। जसरी नयाँ घर तयार भयो भने बच्चाहरू खुसी हुन्छन्। शुभ साइत गर्छन्। तिमी बच्चाहरू पनि नयाँ दुनियाँलाई देखेर खुसी हुन्छौ। शुभ साइत गर्छौ। लेखिएको पनि छ सुनका फूलहरूको वर्षा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। तिमीलाई सुख र शान्ति दुवै मिल्छ। अरू कोही छैन जसलाई यति सुख र शान्ति मिलोस्। अरू धर्म आएपछि द्वैत हुन पुग्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अपार खुसी छ– हामीले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउँछौं। यस्तो होइन– जे तकदिरमा होला त्यो मिल्ला, पास हुनु छ भने भइएला। हरेक कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नु पर्छ। पुरुषार्थ नगर्नेले भन्छन् जे भाग्यमा होला। फेरि पुरुषार्थ गर्न नै बन्द हुन पुग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी माताहरूलाई कति उच्च बनाउँछु। महिलाहरूको मान सबै ठाउँमा हुन्छ। बेलायतमा पनि मान हुन्छ। यहाँ बच्ची पैदा भइन् भने खटियालाई उल्टो बनाइदिन्छन्। दुनियाँ बिल्कुलै फोहोरी छ। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भारतवर्ष के थियो, अहिले कस्तो छ। मनुष्यले भुलेका छन्, केवल शान्ति-शान्ति मागिरहन्छन्। विश्वमा शान्ति चाहन्छन्। तिमीले यो लक्ष्मी-नारायणको चित्र देखाऊ। यिनीहरूको राज्य भएको बेला पवित्रता र सुख शान्ति पनि थियो। तिमीलाई यस्तो राज्य चाहिन्छ नि। मूलवतनमा त विश्वमा शान्ति भन्न मिल्दैन। विश्वमा शान्ति त यहाँ हुन्छ नि। देवताहरूको राज्य सारा विश्वमा थियो। मूलवतन त हो आत्माहरूको दुनियाँ। मनुष्यहरूले त यो पनि जानेका छैनन्– आत्माहरूको दुनियाँ हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले तिमीलाई कति ऊँच पुरुषोत्तम बनाउँछु। यो सम्झाउने कुरा हो। यस्तो होइन, भगवान आउनु भएको छ भन्दै हिड्नु छ। कसैले मान्ने छैन। अझै गाली खान्छौ र खुवाउँछौ। भन्छन् बी.के.ले आफ्नो बाबालाई भगवान भन्छन्। यसरी सेवा हुँदैन। बाबाले युक्ति बताइरहनु हुन्छ। कोठाको भित्तामा ८-१० चित्र राम्रोसँग झुन्ड्याऊ र बाहिर लेख– बेहदका बाबाबाट बेहद सुखको वर्सा लिनु छ, अथवा मनुष्यबाट देवता बन्नु छ भने आउनुहोस् हामी सम्झाउँछौं। यसरी धेरै आउन थाल्छन्। आफै आउँछन्। विश्वमा शान्ति त थियो नि। अहिले यति धेरै धर्म छन्। तमोप्रधान दुनियाँमा शान्ति कसरी हुन सक्छ। विश्वमा शान्ति त भगवानले मात्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। शिवबाबा आउनु हुन्छ, अवश्य केही सौगात लिएर आउनु हुन्छ। एकै बाबा हुनुहुन्छ जो यति टाढाबाट आउनु हुन्छ र एकैचोटि आउनु हुन्छ। यति महान् बाबा ५ हजार वर्षपछि मात्रै आउनु हुन्छ। यात्राबाट फर्किदा बच्चाहरूको लागि केही सौगात लिएर आउँछन् नि। स्त्रीको पति पनि एक दिन बच्चाहरूका पिता बन्छन् नि। फेरि हजुरबुवा, जिजुबुबा.... बन्छन्। यिनलाई तिमीले बाबा भन्छौ फेरि ग्रेन्ड फादर पनि हुनुपर्छ। ग्रेट ग्रेन्ड फादर पनि हुनु पर्छ। वंशावली हो नि। एडम, आदिदेव नाम छ तर मनुष्यले बुझ्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। बाबाद्वारा सृष्टिचक्रको इतिहास-भूगोललाई जानेर तिमी चक्रवर्ती राजा बनिरहेका छौ। बाबाले कति प्यार र रूचिले पढाउनु हुन्छ त्यसैले त्यति नै पढ्नुपर्छ नि। सबेरैको समयमा त सबै फुर्सतमा हुन्छन्। बिहानको क्लास हुन्छ– आधा पौने घण्टा, फेरि मुरली सुनेर जाऊ। याद त जहाँ रहे पनि गर्न सक्छौ। शनिबारको दिन त छुट्टी हुन्छ। सबेरै २-३ घण्टा बस। दिनको कमाईलाई मेक अप गर। पूरा झोली भर। समय त मिल्छ नि। मायाको तुफान आउनाले याद गर्न सक्दैनौ। बाबाले बिल्कुलै सहज सम्झाउनु हुन्छ। भक्तिमार्गमा कति सत्सङ्गमा जान्छन्। कृष्णका मन्दिरमा, फेरि श्रीनाथका मन्दिरमा, फेरि अरू कुनै मन्दिरमा जान्छन्। यात्रामा पनि कति व्यभिचारी बन्छन्। यति दु:ख पनि गर्छन् फेरि फायदा केही पनि छैन। ड्रामामा यो पनि निश्चित छ फेरि पनि हुन्छ। तिम्रो आत्मामा पार्ट भरिएको छ। सत्ययुग त्रेतामा जुन पार्ट कल्प पहिला बजायौ उही बजाउँछौ। मोटो बुद्धिले यो पनि बुझ्दैनन्। जो महीन बुद्धिका छन् उनीहरूले नै राम्रोसँग सम्झेर सम्झाउन सक्छन्। उनीहरूलाई भित्र अनुभव हुन्छ– यो अनादि नाटक बनेको छ। दुनियाँमा कसैले सम्झदैन– यो बेहदको नाटक हो। यसलाई बुझ्न पनि समय लाग्छ। हरेक कुरालाई विस्तारमा सम्झाएर फेरि भनिन्छ मुख्य हो यादको यात्रा। सेकेण्डमा जीवनमुक्ति पनि गायन गरिएको छ। र, फेरि यो पनि गायन छ– ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। सारा सागर मसी बनाउ, जंगललाई कलम बनाउ, धरतीलाई कागज बनाउ.... तैपनि अन्त्य पाउन सकिँदैन। सुरुदेखि तिमीले कति लेख्दै आएका छौ। धेरै कागज होस्। तिमीलाई कुनै धक्का खानु छैन। मुख्य हो नै अल्फ। बाबालाई याद गर्नु छ। यहाँ पनि तिमी आउँछौ शिवबाबाको पासमा। शिवबाबा यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई कति प्यारले पढाउनु हुन्छ। कुनै पनि बडप्पन छैन। बाबा भन्नुहुन्छ– म आउँछु पुरानो शरीरमा। कसरी साधारण रीतिले शिवबाबा आएर पढाउनु हुन्छ। कुनै अहंकार छैन। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीहरूले मलाई भन्छौ नै बाबा पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा आउनुहोस्, आएर हामीलाई शिक्षा दिनुहोस्। सत्ययुगमा बोलाउँदैनौ– आएर हीरा-जुहारतको महलमा बस्नुहोस्, भोजन आदि गर्नुहोस्... शिवबाबाले भोजन ग्रहण गर्नु हुन्न। पहिला बोलाउँथे आएर भोजन खानुहोस्। ३६ प्रकारका भोजन खुवाउँथे, यो फेरि पनि हुन्छ। यो पनि चरित्र नै भन्नुपर्छ। कृष्णको चरित्र के हो? उनी त सत्ययुगका राजकुमार हुन्। उनलाई पतित-पावन भनिदैन। सत्ययुगमा यी विश्वको मालिक कसरी बने– यो पनि तिमीले अहिले जानेका छौ। मनुष्य त बिल्कुल घोर अन्धकारमा छन्। अहिले तिमी प्रकाशमा छौ। बाबा आएर रातलाई दिन बनाउनु हुन्छ। आधाकल्प तिमीले राज्य गर्छौ त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ।
तिम्रो यादको यात्रा पूरा तब हुन्छ जब तिम्रो कुनै पनि कर्मेन्द्रियले धोका दिने छैन। कर्मातीत अवस्था भए पछि यादको यात्रा पूरा हुन्छ। अहिले पूरा भएको छैन। अहिले तिमीलाई पूरा पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश हुनु हुँदैन। सेवा अनि सेवा। बाबाले पनि त आएर वृद्ध तनद्वारा सेवा गरिरहनु भएको छ नि। बाबा गर्ने-गराउनेवाला हुनुहुन्छ। बच्चाहरूको लागि कति चिन्ता रहन्छ– यो बनाउनु छ, घर बनाउनु छ। जसरी लौकिक पितालाई हदको ख्याल रहन्छ, त्यसैगरी पारलौकिक बाबालाई बेहदको ख्याल रहन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई नै सेवा गर्नु छ। दिन-प्रतिदिन धेरै सहज हुँदै जान्छ। जति विनाशको समीप आउँदै जान्छौ त्यति तागत आउँदै जान्छ। गायन गरिएको पनि छ– भिष्म पितामह आदिलाई अन्त्यमा तीर लाग्यो। अहिले तीर लाग्यो भने धेरै हंगामा हुन्छ। यति भीड हुन्छ, कुरै नसोध। भनिन्छ नि– टाउको कन्याउने पनि फुर्सत छैन। यस्तो कोही छदै छैन। तर भीड भयो भने फेरि यस्तो भनिन्छ। जब यिनीहरूलाई तीर लाग्छ तब तिम्रो प्रभाव पर्ने छ। सबै बच्चाहरूलाई बाबाको परिचय मिल्नु त छ नै।
तिमीले ३ पाइला पृथ्वीमा पनि यो अविनाशी हस्पिटल र गड्ली यूनिभर्सिटी खोल्न सक्छौ। पैसा छैन भने पनि हर्जा छैन। चित्र तिमीलाई मिल्छन्। सेवामा मान-अपमान, दु:ख-सुख, ठण्डी-गर्मी, सबै सहन गर्नु पर्छ। कसैलाई हीरा जस्तो बनाउनु कम कुरा हो र! के बाबा कहिल्यै थाक्नु हुन्छ र? तिमी किन थाक्छौ? अच्छा!
१) सबेरैको समयमा आधा पौने घण्टा धेरै प्यार वा रुचिले पढाइ पढ्नु छ। बाबाको यादमा रहनु छ। यादको यस्तो पुरुषार्थ होस् जसबाट सबै कर्मेन्द्रियहरू वशमा होऊन्।
२) सेवामा दु:ख-सुख, मान-अपमान, गर्मी-ठण्डी सबै कुरा सहन गर्नु पर्छ। कहिल्यै पनि सेवामा थाक्नु हुँदैन। ३ पाउ पृथ्वीमा पनि हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोलेर हीरा जस्तो बनाउने सेवा गर्नु पर्छ।
सर्व शक्तिहरूको लाइटद्वारा आत्माहरूलाई मार्ग देखाउने चैतन्य लाइट हाउस भव
सदा म आत्मा विश्व कल्याणको सेवाको लागि परमधामबाट अवतरित भएको हुँ भन्ने स्मृतिमा रहन्छौ भने जे पनि संकल्प गर्नेछौ, बोल बोल्नेछौ त्यसमा विश्व कल्याण समाहित भएको हुन्छ। यही स्मृतिले लाइट हाउसको कार्य गर्छ। जसरी त्यस लाइट हाउसबाट एक रंगको लाइट निस्किन्छ, त्यस्त गरी तिमी चैतन्य लाइटद्वारा सर्व शक्तिहरूको लाइट आत्माहरूलाई हर कदममा मार्ग देखाउने कार्य गरिरहन्छ।
स्नेह र सहयोगको साथसाथै शक्ति रूप बन्यौ भने राजधानीमा नम्बर अगाडि मिल्छ।